Ivandry : Tovolahy nitondra moto maty nodomin’ny kamiao
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → septembre → 15 → Ivandry : Tovolahy nitondra moto maty nodomin’ny kamiao
Nandriaka indray ny rà … Tetsy Ambodivoanjo Ivandry, ny harivan’ny alahady lasa teo. Moto iray no nifanehatra tamina fiarabe. Potika tanteraka ilay kodiaran-droa. Maty tsy tra-drano ilay nitondra azy.
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisim-pirenena dia tokony ho tamin’ny fito ora sy sasany hariva tany ho any no nitranga ity lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ity tetsy Ambodivoanjo, lalana mizotra mihazo an’Ivandry iny. Ny iray fiarabe mitondra ny marika Mercedes Benz, izay hizotra ho any amin’iny Pullman iny, ary ny iray moto scooter Jog Pro, ho any Analamahitsy. Tsy fantatra mazava izay tena zava-niseho, tsy fahitan’ny mpamily ity kodiaran-droa ve sa fisongonana tsy nahafahan’ilay moto ka nifatrarany teny amin’ity fiarabe. Nambaran’ny polisy hatrany fa tena mafy dia mafy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta satria dia nivadibadika tanteraka ilay moto ary nitaritarika ilay mpitondra azy. Dikany, mety ho samy nandeha mafy izy ireo na ny iray tamin’ireto fitaovam-pitaterana ireto. Vokatry ny dona nahazo ilay tovolahy 33 taona moa dia namoy ny ainy teo no ho no eo ity farany. Vatana mangatsiaka sisa no nitsarara teo am-povoan’arabe, tao anaty rà mandriaka. Niditra an-tsehatra avy hatrany moa ny polisy teo anatrehan’ny zava-nitranga. Ary satria, nisy ny aina nafoy dia voatery nanokatra fanadihadiana ny teo anivon’ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana, nitondra ilay mpamilin’ilay fiarabe natao famotorana. Nalefa avy hatrany eny amin’ny tranom-patin’ny Hjra etsy Ampefiloha kosa ny vatana mangatsiakan’ilay mpitondra moto.
Nambaran’ny antontan’isa azo avy amin’ireo mpitandro filaminana fa ny kodiaran-droa no mitana ny loharalaharana eo amin’ny lozam-pifamoivoizana, indrindra fa ireo loza namoizana aina. Tsy fitandremana io na vokatry ny ataon’ireo mpitondra moto sasantsany, na vokatry ny tsy fitandremana, tsy firaharahiana na fisotasotan’ireo mpamily fiara fotsiny ihany eny an-dalana no tsikaritra ho anisan’ny mahatonga izany antotan’isa hidangana be, indrindra fa tato anatin’iny fihibohana iny, rehefa voatery nampiasa ireo kodiaran-droa ny olona fa tsy nisy ny fiara mpitatitra. Ny aina afoy, ny tena maratra ary mety hitondràna takaitra mihitsy, ny fitaovana potika … tsy aleo ve entina milamina, samy mifanaja, samy mpampiasa lalana, samy tonga any amin’izay aleha soa aman-tsara !